राष्ट्रिय अखण्डताप्रति सरकार गम्भिर छैन : डा. महत «
राष्ट्रिय अखण्डताप्रति सरकार गम्भिर छैन : डा. महत
प्रकाशित मिति : मंसिर ४, २०७६ बुधबार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चीन र भारतको सीमा विवादको कुरा जसरी आएको छ, त्यसमा सरकारकै कमजोरी मुख्य कारण भएको आफूहरुको ठहर रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा महतले भने, “जहाँसम्म हाम्रा छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्धको विषय छ, यो अत्यन्तै संवेदनशील र महत्वपूर्ण छ । हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, वर्तमान सरकारले गर्न नसकेको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । उहाँहरु कामभन्दा बढी कुरा गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्न ।”
साक्षात्कारमा उनले कालापानी, महाकालीको विषय पुरानो भएको सुनाए । उनले भने, “नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा सुशील कोइरालाजीले पनि र शेरबहादुर देउवाजीले पनि जहाँनिर यो विषय उठाउनुपर्ने थियो, यो उठाउनु भएकै हो । म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा हामीले द्विपक्षीय सीमा संयन्त्र बनायौं । यसले चाँडोभन्दा चाँडो सीमा विवादको समस्या हल गर्ने कुरा टुँगो लगाउने सहमति भएको हो । त्योअनुसार यो संयन्त्रले काम पनि अघि बढाएको हो ।”
महतले वर्तमान सरकार बहुमतको सरकार रहेको बताउँदै सत्तामा नहुँदा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेताहरुले राष्ट्रियता ‘हाम्रै काँधमा उभिएको छ’ झैं गरि कुरा गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने, “तर, सत्तामा आएपछि उहाँहरुले यी विषय उठाएको हामीले पाएका छैनौं । सत्तामा आएपछि द्विपक्षीय पटक–पटक बैठकहरु भए, भेटवार्ता भए, कहीँकतै यी विषय उठाएको हामीले पाएनौं । यो सरकार हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ र अखण्डताप्रति गम्भिर नभएको स्पष्ट नै छ ।”
उनले नेपालको जमिन चीनले पनि अतिक्रमण गरेको भन्ने कुरा पत्रपत्रिकामा आएको उल्लेख गर्दै भने, “चिनियाँ सरकारको जहाँसम्म सवाल छ, अहिले पत्रपत्रिकामा धेरै ठाउँमा अतिक्रमण भयो भन्ने छ, त्यही महाकालीको सम्बन्धमा पनि भारतसँग सम्झौता गरेको अवस्था छ, यस विषयमा पनि सरकार पटक्कै बोल्दैन ।”
त्यस्तै उनले नेपाल र चीनको सीमा विवादको सवालमा पनि सरकारले सत्य, तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने माग गरे । उनले भने, “नेपाल र चीनको सीमा छ, त्यहाँ पनि धेरै ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ भन्ने कुरा पत्रपत्रिकामा आएको छ । हामीलाई थाहा छैन । चिनियाँ सरकारले होइन भनिरहेको छ । यो विषयमा पनि छानबिन गरी सरकारले सत्थ–तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ ।”
महतले मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनले वर्तमान सरकारलाई सशक्त सन्देश दिने बताए । उनले थपे, “यो सरकार गठन भएको झण्डै दुई वर्ष भयो, यो अवधिमा सरकारलाई जनताले हेरेका छन् । सरकारमा बस्ने पार्टीका नेताहरुले जनतालाई जुन आश्वासन दिएका थिए । जुन सपना कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले बाँडेका थिए, ती कुनैपनि पूरा भएनन् । जनता अहिले निराश छन् ।”